भोजपुरमा पनि भेटिए कोरोना संक्रमित:: Mero Desh
Published on: ११ बैशाख २०७७, बिहीबार १४:४५
विराटनगर । भोजपुरमा पनि कोराना भाइरस (कोभिड–१९) का एक संक्रमित भेटिएका छन् । हथुवागढीका २६ वर्षीय पुरुषमा कोरोना संक्रमण भेटिएको प्रदेश १ सरकार स्रोतले बताएको छ । उनको थ्रोट स्बावको परीक्षण बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा
गरिएको थियो । संक्रमित व्यक्ति विदेशबाट आएको भनिए पनि थप विवरण आइसकेको छैन ।यससँगै कोरोना संक्रमितको संख्या ४८ पुगेको छ । उनीहरुमध्ये १० जना उपचार गरेर घर फर्किसकेका छन् । बिहीबारमात्र स्वास्थ्य मन्त्रालयले उदयपुरकी ५५ वर्षीया महिला र जनकपुरका १४ वर्षीय किशोरमा संक्रमण देखिएको जानकारी दिएको थियो ।
संकटमा सिर्जना : नर्सिङ रोबोटदेखि भेन्टिलेटरसम्म
नेपाली युवा वैज्ञानिकको टोलीले कोभिड–१९ का बिरामीको हेरचाहका लागि ‘नर्सिङ रोबोट’ बनाए । उनीहरूको लक्ष्य छ, स्वास्थ्यकर्मीलाई कोरोना संक्रमित बिरामीबाट जोगाउने । यो रोबोटले आवश्यक खाना र औषधि बिरामीसम्म पुर्‍याउँछ । चीन, इटाली, दक्षिण कोरिया र अमेरिकामा मात्र होइन, नेपालमा पनि संक्रमितलाई रोबोटले सेवा दिनेछ । यस रोबोटको निर्माता कम्पनी हो, पाइला टेक्नोलोजी ।
पाइलाले नै कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि अल्ट्रा भायलेन्ट डिस्इन्फेक्सन रोबोट पनि बनाएको छ । त्यसमार्फत किरणको माध्यमबाट किटाणु नष्ट गर्न सकिने कम्पनीका सहसंस्थापक दीपकमल भुसालको दाबी छ । यसले अस्पताल, बैंक, विमानस्थल, मल, सुपरमार्केट, गोदाम, होटेल, रेस्टुराँ, कार्यालय, विद्यालयलगायत सार्वजनिकस्थलमा किरणको माध्यमबाट हानिकारक किटाणु नष्ट गर्न सकिने भुसाल बताउँछन् । भन्छन्, ‘अल्ट्रा भायलेट डिस्इन्फेक्सन प्रविधि र स्वचालित प्रक्रिया जडान गरिएको यो रोबोटबाट कोरोना संक्रमण रोकेर सार्वजनिक क्षेत्र सुरक्षित राख्न सकिन्छ ।’
पाइला टेक्नोलोजीले भेन्टिलेटर पनि बनाइसकेको छ । त्यसका लागि डा. भगवान कोइरालालगायत चिकित्सकसँग सल्लाह गरेर काम गरेको पाइलाका अर्का सञ्चालक रविन गिरी बताउँछन् । भन्छन्, ‘छिट्टै हामी भेन्टिलेटर सार्वजनिक गर्नेछौँ ।’ उनीहरूले नर्सिङ रोबोट बनाएर ललितपुरस्थित सुमेरु अस्पतालमा परीक्षण गरेका थिए । रोबोटबारे जानकारी गराइएका स्वास्थ्य मन्त्रालय र विभिन्न अस्पतालबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएका छन् । उनीहरूले बनाएको नर्सिङ रोबोटप्रति भारतीय जनता पार्टीका वरिष्ठ नेता तरुण विजयले तारिफ गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री, नेपाली प्रधानमन्त्री, डा. हर्षवर्धन र पाइला टेक्नोलोजीलाई मेन्सन गर्दै रोबोटको तस्बिर ट्विट गरेका छन् ।
सुजिता मृ’त्यु प्र’करणमा दाजु नाता पर्ने प’क्राउ सम्बन्ध यस्तो रहेछ!